Sharaxaad ha nalaga siiyo qaabkii ay wax u dhaceen dilkii wiilkii waalnaa ee aabihiis dilay | Local News | Shacabka Media
Sharaxaad ha nalaga siiyo qaabkii ay wax u dhaceen dilkii wiilkii waalnaa ee aabihiis dilay
Jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Asker, ayaa dalbaday in sharaxaad laga siiyo qaabkii ay u dhacday dhacdadii uu wiilka xanuunsan ee soomaaliga ah, uu falka dilka ah ugu geystay aabihii. Iyaga oo calaamad su´aal saarey iney suurtogal aheyd in falkan laga hortago inta uusan dhicin. Waxeyna codsadeen in banaanka la keeno dhamaan macluumaadka la xiriira falkan, si looga kaashaanto iney markale dhacdo musiibo noocan oo kale ah.
Wargeyska lokalka ah ee Budstikka ayaa warbixin ka qorey kulan ay isugu imaadeen qaar kamid ah soomaalida degan kommunaha Asker, gaar ahaan xaafada uu falkan ka dhacday. Kulankaas oo lagu soo hadalqaaday su´aalo dhowr ah oo la xiriira falkan.
Dr. Maxamed Macalin iyo Khadar Elmi oo kamid ah jaaliyada soomaaliyeed ee Asker, ayaa la hadlay wargayska Budstikka. Waxeyna sheegeen in soomaalidu ku nool deegaankaas ay isweydiinayaan su aalo ay kamid yihiin: Wiilka falka gaystay ee xanuunsanaa, caawintii uu u baahnaa maka helay hey´adaha caafimaadka?, kommunaha? iyo waliba hey´ada xanaanada caruurta?. Sidoo kale ma habooneyd in wiilka lagu hayo isbitaalka?, maxayse la xiriireen dhacdooyinka ay sheegeen in boolisku ay kala kulmeen wiilkan, inta uusan falka geysan.? Waxeyna codsadeen in dhamaan macluumaadka la xiriiro falkan, banaanka la keeno iyada oo la qurxineyn.
Khadar Elmi oo ah gudoomiyaha ururka Sportiga Waryaa, ayaa sheegay inuu aabaha A.U.N uu la kulmay dhowr mar, markii ugu danbeysayna ay aheyd ku dhawaad sanad kahor. Wuxuuna markaas aabuhu ka wel-welsanaa caafimaadka maskaxeed ee wiilka, balse lama sheegi karin in wiilku uu ahaa mid ku kici karay falal cunfi ah.
Soomaalida kunool deegaanka Asker ayaa sheegay in aabaha iyo wiilkiisu ay ahaayeen kuwo aan xiriir fiican la laheyn jaaliyada soomaaliyeed ee Asker. Waxeyna wiika ku tilmaameen inuu ahaa mid aamusan oo aad u af-gaaban.
Khadar iyo Dr Maxamed Macalin ayaa isku raacsan in dhacdadan ay ka weynaan karto wiilka iyo aabihii, loona baahanyahay in laga salgaaro. Iyaga oo cadeeyay in hadii ay jireen xanuuno maskaxeed, ay aheyd iney helaan gacantii caawineed oo ay u baahnaayeen.
Maxamed Macalin ayaa dhankiisa sheegay in hadii ay jirto cid howsheeda gabtay oo aan kasoo bixin, ay tahay in lala xisaabtamo.
Dhanka kale booliska ayaan wali soo saarin warbixinta buuxdo ee la xiriirta dhacdadan, iyaga oo sheegay iney wali wadaan baaritaano iyo wareysiyo ay la yeelanayaan dadka markhaatiga ahaa. Waxey sidoo kale sheegeen iney qiimeyn ku sameynayaan in wiilku uu xiskuusu taam ahaa, marka uu falka geysanayay.
« Previous StoryXildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka cusub ee la doortay oo Garoowe ku geeriyoodayNext Story »Daawo:Luul Araweelo Kulmiye oo Adeerkeed Culusoow ku taageertay Somalida-Norway Muqdisho in lagu celiyo:Qalinkii:Badar iyo Beeso